Kuyini ukuhlinzwa kwe-refractive | Bezzia
UToñy Torres | 13/05/2022 14:00 | Amathiphu ezempilo, Izifo
Sekuyiminyaka ethile abantu abanezinkinga zokubona bakwazi ukuphendukela kubo ukuhlinzwa refractive ukuze uwalungise futhi kuqedwe izibuko noma contact lens unomphela. Ukuhlinzwa kwe-refractive kuhlanganisa iqembu lokungenelela noma amasu okuhlinza lapho izinkinga ezithile ezibangela ukuguqulwa kombono zilungiswe noma ziqedwe. Isibonelo, i-myopia, i-astigmatism, i-hyperopia ngisho nanamuhla i-presbyopia nayo ingalungiswa.
Usizo oluphelele lwabantu abafuna, abafuna noma abadinga ukuyeka ukugqoka izibuko, kungaba ngenxa yobungcweti, ezemidlalo noma nje izizathu zobuhle. Ngoba izibuko ziyi-accessory enhle kakhulu, ejabulisayo engeza ngisho nobuntu ebusweni, kodwa kithi sonke okufanele sizigqoke nsuku zonke, aziyona into eyisikhumbuzo sokuthi ngaphandle kwazo, silahlekile.
1 ukuhlinzwa refractive
1.1 Ukuhlinzwa kwe-laser refractive, LASIK noma PKR
1.2 I-lens ye-intraocular nayo ingasetshenziswa
1.3 Ngazi kanjani ukuthi ngingahlinzwa?
Kunezinhlobo ezahlukene zokuhlinzwa kwe-refractive okufanele zilungiswe izinkinga zokubona. Esimeni ngasinye, kuzoba uchwepheshe onquma ukuthi iyiphi indlela efaneleke kakhulu futhi ngisho nangaphezu kweyodwa indlela engasetshenziswa ngesikhathi esifanayo kumuntu ofanayo. Okulandelayo siyakutshela yiziphi izinhlobo zokuhlinzwa kwe-refractive, lapho zisetshenziswa nokuthi inqubo yenziwa kanjani.
Ukuhlinzwa kwe-laser refractive, LASIK noma PKR
Lapho i-laser isetshenziselwa ukulungisa izinguquko zeso ezidala izinkinga zokubona, okumayelana nokuguqula isimo se-cornea ukuze ama-diopter avimbela ukubona kahle akwazi ukulungiswa. Umumo ungahluka kuye ngokuthweswa iziqu yesiguli ngasinye, isibonelo, lapho kusetshenziswa inqubo ye-LASIK, ukungenelela okulandelayo kwenziwa.
Ukulungisa i-myopia: okwenziwayo ukwenza isicaba i-curvature nge-laser, ukuze ukukhanya kugxile kahle ku-cornea.
Endabeni i-hyperopia: Kulesi simo, imiphetho ye-cornea ibunjwa ukuze idale ijika.
ngenxa ye-astigmatism, okwenziwayo ukwenza indawo ibe isicaba ngejika elikhulu le-cornea ukuyishiya ifana ngangokunokwenzeka.
Endabeni okuthiwa ukuhlinzwa refractive PKR, inqubo kuyafana kodwa kuvame ukucasula kakhulu isiguli. Bekuyindlela yokuqala eyasetshenziswa ukulungisa izinkinga zokubona, ngakho-ke namuhla isithuthukiswe kakhulu ngakho-ke ayisasetshenziswa njalo.
I-lens ye-intraocular nayo ingasetshenziswa
Kwezinye izimo, esikhundleni sokusebenzisa i-laser ukuze ulungise i-cornea futhi uthuthukise umbono, ingafakwa ilensi noma i-lens ikhishwe, kuye ngezidingo zesiguli ngasinye. Lena inqubo evame ukusetshenziswa uma isiguli sinama-diopter amaningi kunalawo avunyelwe ukwenza ukuhlinzwa kwe-laser refractive. Endabeni yokufakwa kwe-lens, i-lens iyagcinwa. Kwezinye izimo, i-lens iyasuswa futhi i-lens aphakic ifakwe, okuyindlela esetshenziselwa ukususa ama-cataract.
Ngazi kanjani ukuthi ngingahlinzwa?
Ukuze ukwazi ukwenza ukuhlinzwa kwe-refractive esimweni sokudinga ukulungisa ukukhubazeka kokubona, njenge-myopia, i-astigmatism noma i-hyperopia, isiguli kufanele sihlangabezane nemingcele ethile. Ngakolunye uhlangothi, ukuthweswa iziqu kufanele kuzinzile okungenani iminyaka emibili. Eminye imingcele yokuphepha okufanele ihlolwe nguchwepheshe esimweni ngasinye nayo iyahlolwa.
Indlela engcono kakhulu yokuxazulula konke ukungabaza kwakho ukuya ekubonisaneni nochwepheshe ongakwazi ukubukeza futhi akuchazele izinketho zakho. Njengoba kunamapharamitha amaningi ahlolwayo esimweni ngasinye, izidingo zesiguli ngasinye kanye nethuba lokuthola umphumela oyifunayo kungase kuhluke esimweni ngasinye. Ngaphandle kwalokho, Nakuba kuwukuhlinzwa okuphephile kakhulu, akunayo imiphumela engemihle. okufanele futhi ibaluleke. Ngaso sonke isikhathi zibeke ezandleni ezinhle, xazulula konke ukungabaza. Shiya isikhathi lapho ungabonisa khona futhi unqume ukuthi ufuna ukuhlinzwa nini, kanjani futhi nobani ukuze kuqedwe izinkinga zombono unomphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Izifo » Kuyini ukuhlinzwa kwe-refractive?